Uku ndiko kutsva uye kukuru kwe Instagram | IPhone nhau
Pane nguva zhinji dzataka bvunza Instagram kuti ivandudze logo yayo. Kubva iOS 7, vashandisi venguva dzose yekutora mifananidzo pasocial network vaifanira "kumedza" mazuva ese ine icon pane edu masikirini anga asina chekuita nemagadzirirwo emadhizaini akaitwa kubva ipapo zvichienda mberi uye kuti mamwe ese maapplication akave akaverengerwa zvishoma nezvishoma mune avo magadzirirwo. Iyi nhamo yakatora makore matatu, chimwe chinhu chisinganzwisisike kune chishandiso padanho re Instagram. Nhasi, pakupedzisira, iyo yekumirira yasvika kumagumo.
Uye akazviita nenzira inosimbisa kuti isu tichaona shanduko uye kuti isu hatizofuratidze. Iyo icon yeapp yatora shanduko hombe munhoroondo yayo, ikozvino ichitiratidza imwe nyowani iyo, seyakasiyana sezvairi, isingazivikanwe. Uye ndezvekuti, pekutarisisa, inogona kunge iri yeimwe pikicha yekugadzirisa mifananidzo muApp Store, kubvira zviratidzo zvese zvakapinda zvakadzama mukati memakore aya, zvakanyangarika kune maziso emushandisi wepakati.
Sezvatinogona kuona muvhidhiyo yakaburitswa nekambani, aya mavara a priori zvishoma pfari garish, inoenderana nemusanganiswa weavo vakagadzira palette yeiyo yekutanga icon. Zvisinei, chii Iyo haina kutikwanira zvakakwana, irwo rudzi urwu rwemhando dzakasiyana-siyana gradient mukusiyana nezvatinowana mukati meapp. Nekuti, sekudaro, shanduko hadziuye chete mu icon.
Mukati tinowana shanduko dzese dzatakatotaura mazuva mashoma apfuura, ichipa yakanyanya kutaridzika interface, uko zvemukati zvakakosha uye zvakajeka mune zvese. Nekudaro, zvinotitorera imwe nguva kujairira chokwadi chekuti chimwe chinhu chisina kujairika sezvachinoonekwa pakutanga, chinogona kuviga chigadzirwa chakadzikama mukati.
Goverana maonero ako nezve ichi chinoshamisa kugadzirisa mune zvakataurwa, ndine chokwadi chekuti hauna kunge uine hanya kana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Instagram inounza kwazvo mhuka yekuvandudza kusvika nhasi
Enric D'Varela akadaro
yakagadziriswa yakaipisisa munguva, chakashata chinhu
Pindura Enric D'Varela
Ini ndinoda iyo nyowani interface, ndinovenga iyo icon
Tafadzwa mukaro (@ tafadzwa1) akadaro
Zvakanaka, ini handisi kuona iyo nyowani interface. Ingori icon, enda instagram mojon
Pindura kuna Xab1t0  (@ Xab1t0)